चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धले सुनको भाउ बढ्दै ,कति पुग्यो प्रतितोला आज ? | NepalDut
चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धले सुनको भाउ बढ्दै ,कति पुग्यो प्रतितोला आज ?
चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धले सुन बजारमा प्रभावित भएपछि नेपालमा सुनको भाउ दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
बिहीबार प्रतितोला ६४ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सूनको मुल्य आज एक हजारले बढेर ६५ हजारमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको हो ।
त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य ६४ हजार ७ सय पुगेको छ। बुधबार ६३ हजारमा कारोबार भएको सुन बिहीबार एक हजारले बढेर ६४ हजारमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको हो। हिजो ६४ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुन १ हजार बढेर ६५ हजार निर्धारण भएको महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए।
यो हाल सम्मै उच्च मूल्य हो। यसअघि २०७० भदौ १२ गते सुनको भाउ तोलामै ऐतिहासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको थियो। मूल्य घटबढ हुँदै २०७५ फागुन ८ गते पुनः ६३ हजार ३ सय रुपैयाँमा पुगेको थियो। अहिले भने रेकर्ड नै भएको महासंघले जनाएको छ।